Endai Huru neTriggered Email Strategic kuDhivha Sky-Yakakwira ROI | Martech Zone
Enda Huru neTriggered Email Strategic kuDhivha Sky-Yakakwira ROI
Chitatu, July 29, 2015 Chitatu, July 29, 2015 Fayez Mohamood
Maimeri akakwenenzverwa inzira huru yekuita vatengi uye kutyaira kutengesa, asi zvisirizvo pamusoro pechinhu chinokonzeresa uye maitiro ekuzvishandisa kuti vachengetedze vamwe vashambadzi kubva mukushandisa zvakakwana zano.
Chii chinonzi Triggered Email?
Padanho repamoyo, chinokonzeresa kupindura otomatiki, senge kukwazisa kwekuzvarwa kwakagadzirwa nemoto kubva kuGoogle. Izvi zvinotungamira vamwe kuti vatende kuti maemail akakonzerwa anogona kushandiswa chete mune mashoma mamiriro. Asi pachokwadi, iwo runyorwa rwezviitiko zvinokonzeresa, dhata uye zviito zvinenge zvisina muganho.
Panzvimbo pekuwira mumusungo wekufunga diki kana zvasvika pazvinokonzeresa, vashambadziri vanofanirwa kufunga nezvezvinokonzeresa sezvingaite chero chikonzero chekudzokororazve nekuchengetedza mutengi. Mumakambani ayo arikushandisa maemail akakonzerwa, kushamwaridzana kwemotokari yekutenga chinhu chinowanzoitika. Anotenga anogona kuisa zvinhu zvakawanda mungoro yake obva asiya saiti. Iyo kambani inoshandisa iyo data seyakonzera, kutumira mutengi chiyeuchidzo cheemail nezvezvinhu zviri mungoro kuti awedzere ruzivo rwekutenga uye pakupedzisira kutyaira kutendeuka.
Zvinokonzeresa zvine hukama ne kusiya ngoro yekutengesa inzira inopupurirwa yekutyaira mari nekuwanazve tarisiro yemutengi Asi nezvose zvinotariswa nhasi pamushandirapamwe analytics uye data yevatengi sezvinhu zvakakosha zvinofambisa shanduko, zvinogona kuve nyore kune vashambadziri kurasikirwa nekuona zvimwe zvakakosha zvinyorwa mukati merimwe sangano, senge zvigadzirwa zvemabhuku uye shanduko yemutengo.
Kana vashambadziri vachitsanangura zvinokonzeresa zvakanyanya semukana wekudyidzana nevatengi zvichibva pane zvese maitiro evatengi uye shanduko kukitori yezvigadzirwa, vanogona kutanga kufunga nezvekambani data senge shanduko yemutengo uye vatengi vanodzora mapoinzi anokonzerwa nekunze-kwe-stock zviziviso semukana wekuvaka mushandirapamwe wekutanga. Nhanho inotevera ndeyekumisikidza zvinokonzeresa uye kuyedza iyo inobata-mapoinzi anotyaira akanyanya kuvhurika, tinya uye mitengo yekutendeuka.
Semuenzaniso, makambani anogona kuwedzera data revatengi kuti vavake mishandirapamwe yekukomberedza kutenderera kwakasiya siyana, kusanganisira kutsvaga, chikamu uye peji rezvigadzirwa. Kusiya kwega kwega mukana wekudzidza kubva pane hunhu uye kutanga email yakasarudzika, inoenderana inosimudza zvigadzirwa uye zvinopihwa zvinoenderana neiyo shopper. Imwe nzira inoshanda ndeyekutanga email kutenderera zvigadzirwa, senge kuderera kwemutengo kana kushomeka kwekuverenga.
Vatengesi vanogona zvakare kuyedza nezvakakosha zvipo kuti vaone kuti chii chinotyaira iyo yepamusoro ROI. Semuenzaniso, danidziro yekukurudzira inoyeuchidza mutengi nezve yakasiiwa yekutengera zvinhu inogona kutapira chibvumirano nekupa pachena kutumira. Vatengesi vanogona kuyedza zviitiko zvakasiyana kuti vaone kuti ndeipi nzira inowirirana zvakanyanya nekutengesa uye nezvinangwa zvemari.
Munguva yakapfuura, kuzivisa kubata-mapoinzi uye kushandisa mushandirapamwe wekusimudzira kwaitora nguva uye kuchidhura. Asi neepamberi ecommerce inokonzeresa mhinduro dzave kuwanikwa, vatengesi vanogona kuvhura mumazuva, kwete mwedzi uye kutumira zvinotangisa munguva chaiyo. Ndichiri kumhanya kwakakonzera email mishandirapamwe vatengesi vanogona, uye vanofanirwa, A / B bvunzo inokonzeresa misoro yenyaya uye dhizaini kuve nechokwadi chekuti iko kupihwa kuri kutumirwa panguva yakakodzera kune vatengi chaivo.
Vatengesi vanoshandisa kuongorora kweA / B kuti vawane kupihwa chaiko vanogona kukohwa mibairo inoshamisa. Mune chimwe chiitiko, mucherechedzo wakawanikwa uyo unopa pa vanotengesa zvakanyanya vakanga 300% inoshanda zvakanyanya pane kupa kune "vatsva." Dhata senge iyi inobatsira vatengesi kuwedzera kudzoka pamishandirapamwe, sezvinoita mashandisiro ehunyanzvi senge yekuisa zita rezvigadzirwa mumutsetse wenyaya weemail, izvo zvinoita kuti zvive gumi zvichishanda.
Vatengesi nhasi vane zvakawanda zvimwe sarudzo nekuda kwedata hombe uye epamberi ecommerce inokonzeresa mhinduro. Vaya vanoda kuwana mukwikwidzi vanofanira kufunga zvakazara pamusoro pekutanga mushandirapamwe pane kungozvipwanya nekambani yemaimeri zano. Iine nzira yakavakirwa pakuregedzera mutengi uye chigadzirwa dhatabheki dhata kutyaira akakodzera uye nenguva inokonzeresa kutaurirana, vashambadziri vanogona kutanga kutyaira kwakakura kuwedzera.
Tags: ecommerce yakakonzeraecommerce yakakonzera emailtiggeremail.iozvakakonzera maemail
Fayez Mohamood ndiye anovamba uye CEO we Bluecore, zvichigonesa vatengesi veCommerce kugadzira nekuparadzira maemail akakonzerwa nemaemail nekumhanyisa uye kunyatsoita zvisati zvamboitika, zvine mutsindo kugadzirisa maitiro evatengi uye kugadzirisa zvinyorwa mumasekondi. Iine vanopfuura makumi manomwe makumi manomwe vanobatirana vanomiririra anopfuura zana mavatengesi. Bluecore ndeimwe yematanho anokurumidza kukura muNew York City, achangovhara Series A kutenderera inotungamirwa naFirstMark Capital.
Iko Kukanganisa kweMuchinjikwa-Midziyo Nzendo uye Yechokwadi-Nguva Yekuita